Home Wararka MW Xaaf oo magacaabay guddiga doorashooyinka Galmudug
MW Xaaf oo magacaabay guddiga doorashooyinka Galmudug
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug aya caawa magacaabay guddiga doorashooyinka Galmudug, kaasoo lagu wado in uu qabto doorashooyinka maamulka Galmudug.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geellle Xaaf ayaa shaaca ka qaaday in la qaban doono doorashooyinka Galmudug horraanta bisha foodda nagu soo haysa ee Febraayo isagoo ku wargeliyay guddiga doorashooyinka Galmudug in ay dardar geliyaan hannaanka doorashada.
Waxaa sidoo kale magacaabay guddi doorashooyin Madaxa Galmudug Sheekh Shaakir magacaabidda Guddiga Doorashooyinka, ayaa imanaya habeen kadib markii uu fashil ku soo dhammaaday kulan uu Magaalada Dhuusamareeb ay ku yeesheen Ahlu Sunna Waljameeca iyo RW Xasan Cali Kheyre, taasoo ugu danbeyntii lagu qasbay Kheyre in uu ogolaado labaatanka xildhibaan ee ASWJ shuruud la’aan.
Dhisida Maamulka Galmudug ayaa soo jiitameyso muddo ku dhow sanad, waxaana sii adkaanaya sidii loo qaban lahaa doorashooyin lagu dhan yahay si Galmudug ay u yeelato maamul. RW Kheyre & MW Farmaajo oo labada kasoo jeeda Galmudug aya raba in qabaa’ilada ay ka dhasheen ee laga tirada badan yahay ay ku yeesheen maamulka awood dheeri ah si ay u helaan fursad in ay soo magacowdaan xildhibaanada Federaalka ah ee lagu wado in ay doorasho u tagaan Galmudug Bisha Oktober ee sanadkan 2020